ကမ်းပါးယံ မိုးဆွေငှက် (Cliff Swallow) သည် ဟီရွန်းဒင်ဒေး (Hirundinidae) မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သော ပျံလွှားငှက် အုပ်စုဝင် ငှက်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ထိုငှက်တို့သည် မြောက်အမေရိကတွင် ပေါက်ဖွားပြီး အသိုက်ပြောင်းလေ့ ရှိသော ငှက်များ ဖြစ်ကာ တောင်အမေရိက တွင် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ဘက် ဒေသ အထိ ဆောင်းခိုနေထိုင်လေ့ ရှိကြသည်။ အနောက်ဥရောပ ဒေသတွင် အလွန်တွေ့ရခဲသော ငှက်မျိုး ဖြစ်သည်။
↑ BirdLife International (2012). "Petrochelidon pyrrhonota". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
↑ "Cliff Swallow (Petrochelidon pyrrhonota)" (in en) (2017). The Birds of North America Online. doi:10.2173/bna.cliswa.03.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကမ်းပါးယံမိုးဆွေငှက်&oldid=709703" မှ ရယူရန်
၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။